Madaxweyne Deni oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan Puntland, eedeyna u jeediyey DF | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweyne Deni oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan Puntland, eedeyna u jeediyey DF
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xerada ciidanka Xorgoble ee Degmada Qardho tababar ugu soo xiray dufcaddii 2-aad ee dhammaysata tababarkooda, kuwaasoo ka tirsan ciidanka Daraawiishta Puntland.
Ciidankan tababarku usoo xidhmay maanta ayaa ka kala yimid dugsiyada Xorgoble, Badhan iyo Xerada 54-aad ee Taliska Ciidanka Daraawiishta. waxayna soo bandhigeen xirfado xeeldheer oo ay barteen mudadii uu u socdey tababarku.
Madaxweyne Deni oo la dardaarmay ciidanka maanta tababarku u soo xirmay ayaa sheegay in Dastuurka Puntland iyo kan Soomaaliyaba uu farayo Dowladda ilaalinta sharafta shacabka. Waxa uu xusay in DFS isku koobtay Dhaqaalaha Beesha caalamku ku bixiyo dib u dhiska Ciidamada Soomaaliya iyo sugidda Amniga.
“Sida Dastuurka Puntland iyo kan Soomaaliyaba farayo Dowladda waajibaadka laga rabo waa ilaalinta sharafta karaamada iyo amniga ummadda ay u shaqaynayso, shaqadaasina waxaa laga rabaa waa ciidamada, sidaasi daraadeedna waxaa Xukuumadda ka go’an in ahmiyadda koowaad, labaad iyo Sadexaadba la siiyo dhismaha ciidamada kor u qaadidda noloshooda, dhammaystirka agabkii ay ku shaqayn lahaayeen, si ay u noqdaan dad waajibkooda gaadha”.
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku amray ciidamada Puntland inay u diyaar garoobaan difaaca dhulkooda iyo xuduudahoodaba, waxa uu Madaxweyne Deni fariin adag u diray Soomaaliland.
Madaxweyne Deni oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan Puntland, eedeyna u jeediyey DF was last modified: June 21st, 2020 by Admin
Dhageyso:-Dood ku saabsan Cadaalada Gaar ahaan Midib Takoorka.